Kurdistance: Tsy Misy Vaovao Tsara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2018 13:26 GMT
Tamin'ity herinandro ity, nitondra hatezerana sy hadisoam-panantenana nanoloana ireo fihetsiketsehana tsy nampiova mihitsy ny fiainan'ny mponina Kiorda ireo lohahevitra mahavàka saina tao amin'ireo blaogy Kiorda
Ndeha hatombontsika amin'ny Kurdish Aspect tamin'ity herinandro ity izany, sy ny nandefasany ny sazy iray nomena ny zazakely tao Kiordistana Atsinanana (Iràna Andrefana) izay tratra teo ampangalarana tapa-mofo. Tena faran'izay mampalahelo ireo sary rehefa atopinao kely ny maso ho amin'ny sarin'ilay zazakely, terena hanome ny tànany hohitsahin'ny fiarabe mba ho saziny. Mampahatsiahy ny trangan-javatra amin'izao fotoana izao ihany koa ny fandefasany mikasika ilay vehivavy Kiorda iray, Malak Ghorbany, izay nohelohina hotorahana vato mandra-pahafatiny. Hiwa avy amin'ny Hiwa Hopes manome rohy iray mankaminà fanangonan-tsonia an-tambajotra mba hamonjena azy. Nafàna ireo fihetsika mikasika ny trangan'i Malak, sy izay hanjo an'ireo Kiorda Iraniana tmin'ny ankapobeny… tsy be mankaiza miohatra amin'i Mizgin avy amin'ny Rasti:
Lohahevitra iray hafa izay nahazo vahana ny vaovao izay nivoaka voalohany tamin'ny ADNKI mikasika ny fanamelohana ho faty vehivavy Kiorda iray, Malak Ghorbany. Fantatrao izay tena manjo ahy marina, dia ny fidehadehan'ireo persiana tsirairay eto amin'ity tany ity momba ny maha-olon'ny sivilizasiona azy ireo. Ambanimbanian'izy ireo mihitsy aza ireo Tiorka noho ny fomba baribariana, fomba Kernalista ataon'izy ireo, izay mahatsikaiky satria manao tahaka izany koa ireo Persiana … indrindra indrindra fa amin'ireo Kiorda.
io no mahatonga antsika hanana firenena Persiàna goavana sy maharaka ny sivilizasiôna izay mirotsaka aminà endrika famonoana efa fahagolan-tany, zavatra izay ananan'ilay firenena Persiàna goavana sy maharaka ny sivilizasiôna hafanam-po tanteraka. Araka ny Amnesty International, tamin'ny faran'ny taona 2002 dia nambaran'i Iràna ny didim-pitsarana iray manafoana ny famonoana amin'ny alalan'ny fitorahana vato. Saingy mavesatra loatra ho an'ny firenena mihoson-drà io somary maha-tokantena azy io, ary ny Septambra 2003, niverina tamin'io izy ireo.
Manome ny toro-arika ho antsika ihany koa i Rasti mikasika ny ho lohahevitry ny adihevitra manaraka ao amin'ireo blaogy Kiorda amin'ity herinandro ity, ny an'ny Kiordistàna Avaratra (Tiorkia Atsimo-Atsinanana)
Amin'ny fanehoana hevitra ao anaty lahatsorany “Fijery Avy Any Amin'ny Trano Fitaratra iray“, kepokepohan'i Mizgin ny governemanta tiorka noho ireo tetika famoretana ataony hanoherana ireo Kiorda ao amin'ny faritra Atsimo-Atsinanany, tamin'ny fanambaràna fa arakaraka ny hanosehan'ny governemanta no vao mainka koa hahatsapana hetsika marobe avy amin'ny vahoaka. Ho valin'ireo fanendrikendrehana nentina hamelezana ireo ben'ny tanàna 56 ao anatin'ireo faritra kiorda noho ny nanaovany sonia ny fanangonantsonia iray hanavotana ny RojTV, nanana izao manaraka izao nolazaina i Mizgin:
Tohizan'ilay lahatsoratra ny fanomezana savaravina momba ireo vesatra marobe teny anoloan'ireo tribonaly samihafa, firy ny isan'ireo nafahana madiodio, firy ny isan'ireo mbola mitohy, sy ny sisa…, ary faranany amin'ireo fiampangana sasantsasany mbola vao haingana anenjehana an'i Osman. Mbola mitohy ny sasantsasany amin'ireo, toy ny fiampangana azy sy ireo ben'ny tanànan'ny DTP 55 hafa, noho ny fandefasana taratasy fanohanana ny RojTV ho any amin'ny Praiminisitra danoà Rasmussen sy noho ny fandefasana fiara mpitondra marary an'ny fididiana any tanànan'i Amed , mba hanaterana ny fatinà mpiady anaty akata ho any amin'ny fianakaviany.
Angamba ny iray tamin'ireo fiampangana tena mahatsikaiky indrindra an'i Osman dia ilay niampangàna azy ho “nampidina ambany ampahibemaso ny vahoaka tamin'ny fanehoana fanajàna ireo fahasamihafana anaty foko sy faritra”, fiampangana niainga avy taminà tafa tao tanaty gazetiboky iray. Aiza eto ambonin'ny tany no misy olona iray voampanga ho mpampihorohoro noho ny fanaovana fanambaràna maneho fanajàna ny fahasamihafàna anaty foko na faritra? Sa azo saintsainina ve ny fisian'ny olona iray ao Etazonia voampanga ho mpampihorohoro noho ny fitenenana hoe “M. Abdullah Ocalan?
Ao Tiorkia irery ihany fa tsy any an-kafa any
Tsy i Osman irery no ben'ny tanàna na mpanao politika avy amin'ny DTP nosotasotaina taminà fiampangana mampihomehy, saingy izy no tena kinendrin'ny marobe tamin'ireo fiampangana. Mifanaraka mivantana amin'ny lazany io, laza iray izay tena heverin'ny fanjakàna ho zavatra tena mampidi-doza.
Araka ny lahatsoratra iray nosoratan'i Vladimir teo amin'ny Avy any Holandy hatrany Kiordistàna, mandany vola be avy amin'ny tetibolam-pirenena ao amin'ireo faritra Kiorda ao Atsimo-Atsinanana, ny Repoblikan'i Tiorkia, kanefa manamarika toy izao i Vladimir :
Raha toa tena mampiasa vola be marina any amin'ireo faritra kiorda ny Fanjakana Tiorka, dia tena manao zavatra tsy mety ry zareo izay. Ny fitomboana vao haingana amin'ny famonoantena ataon'ireo ankizivavy kiorda sy ny tsy fisian'ireo ankizivavy mamonjy sekoly dia midika fa tokony ilaina ny mitondra fanavaozana ifotony amin'ny politikan'ny fanjakana Tiorka.
Ankehitriny, hilaka hianatsimo mankany Kiordistàna Atsimo (avaratr'i Iràka) manontany tena i Hiwa Hopes raha nanana ny marina na tsia ii Barzani tamin'ny fitenenana hoe nampiasaina nandritra ireo taona maro ho toy ny vatom-panorona ireo Kiorda… ny valiny… eny mirefodrefotra! Ary Fijery avy amina Amerikana Kiorda iray no mitatitra ny fahasorenany amin'ny fahitana fa niverina any Iràka ny rahalahy iray madi-doha, mifanohitra amin'ny fitsaràny manokana tsara indrindra avy aminy